विराटनगरका लक्ष्मणले घाँ’टीमा आफैले कसरी रे’टे ? – ताजा समाचार
विराटनगरका लक्ष्मणले घाँ’टीमा आफैले कसरी रे’टे ?
काठमाडौ । एक व्यक्तिले आफ्नो घाँ’टी आफैं रे’टेका छन् । विराटनगर महानगरपालिका–१६ नेपाल बैंक पछाडिको सडकमा एक पुरुष आज साँझ र’क्ता’म्य अवस्थामा लडि’रहेका भेटिएका छन् । रक्ताम्य अवस्थामा लडि’रहेको देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खवर गरेका हुन् ।
घटनास्थलमा पुगेर प्रहरीले अनुसन्धान थाल्दा ब्लेडले आफ्नै घाँ’टी रे’टेर घाइते भएर लडेको पाइएको छ । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका घर भएका ३१ वर्षीय लक्ष्मण लिम्बू सडकमा लडि’रहेको अवस्थामा भेटिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी राजकुमार खिउजुले बताउनुभयो । र’क्ता’म्य अवस्थामा भेटिएका उनलाई प्रहरीले उद्धार गरेर उपचारका लागि कोसी अस्पताल पठाएको छ ।
ब्ले’डले उनको श्वा’स नलीमासमेत भेटेको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. प्रज्वल खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । डा. खतिवडाले तत्काल घाँटीको शल्यक्रिया गराउनु पर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । सामान्य बोल्न सक्ने अवस्थामा उद्धार गरिएका लिम्बू ला’गु’औ’षध प्रयोगकर्ता भएको खुल्न आएको छ ।
प्रहरीका अनुसार उनी दैनिक जसो भारतको जोगवनी पुगेर ला’गुऔ’षध सेवन गर्दै नेपाल फर्कने गरेका थिए । उनले घरमा बुवा र आमा वृद्ध अवस्थामा रहेका कारण आफूलाई तनाव भएकाले ब्लेडले घाँ’टी रे’टेर आ’त्मह’त्याको प्रयास गरेको प्रहरीलाई बताएका छन् । प्रहरीले घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ ।